“Waxba igama gelin haddii Paul Pogba uu ka tago Manchester United” – Rio Ferdinand – Gool FM
“Waxba igama gelin haddii Paul Pogba uu ka tago Manchester United” – Rio Ferdinand
(Manchester) 05 Jan 2021. Rio Ferdinand ayaa sheegay inay waxba ka galin haddii uu Paul Pogba ka tago Kooxda Manchester United suuqa xagaaga, maadaama uu aaminsan yahay in kooxdu ay wax walba u gaarto xiddiga Aston Villa ee Jack Grealish.
Xaaladda Pogba ee kooxda Man Utd ayaa in muddo ah la isla dhexmarayay, iyadoo wakiilkiisa Mino Raiola uu sheegay inuu mustaqbalka laacibkan uu wakiilka u yahay ka tagi doono garoonka Old Trafford.
Faallooyinkaas ayaa yimid xilli Man United ay ku dhibtoonaysay horyaalka Premier League, isla markaana laga soo reebay tartanka Champions League.
Tan iyo khasaarihii ka soo gaaray RB Leipzig bishii December, Kooxda Man United ayaa guuleysatay afar kulan, waxaana ay barbaro gashay labo kale lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaareen horyaalka Premier League, iyagoo dhibacaha la wadaaga Liverpool oo hoggaanka u haysa haatan horyaalka.
Pogba ayaa ka shaqeeyay sidii ay dib ugu soo laaban lahayd kooxda, laakiin Ferdinand ayaan ka walwal qabin haddii uu dhaqaaqo xagaaga, waxaana uu jeclaan lahaa inuu arko Red Devils oo ka dhigeysa xiddiga reer England ee Grealish saxiixooda cajiibka ah.
“Waxba igama gelin haddii Pogba tago iyo haddii kale, Grealish waa xiddigeyga,” Rio Ferdinand ayaa sidaasi hadalkiisa ku bilaabay.
“Waan aqaanay tan iyo yaraantiisii, wuxuu yimid makhaayadayda Aniga iyo Aabihiisna waxaan u helay tikityo ciyaar ah.”
Ferdinand waxa uu dareensan yahay in habka uu u dheelo Grealish oo uu u madadaaliyo daafacyada ay la mid tahay qaabka ay u ciyaaraan sida Ronaldinho iyo Lionel Messi.
Horudhac: Manchester United vs Manchester City… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee Manchester Derby)